Ezinye izindlela ezihamba phambili zeTeamViewer Okufanele Uzame (2020) - Ama-Softwares
ITeamViewer iphakathi kwesoftware ekude kakhulu ekusiza ukuthi uxhume nezindawo zokusebenzela eziningi ukude. Manje sezihambile lezo zinsuku lapho uxhuma kunoma iyiphi idivayisi yesilawuli kude esetshenziselwa ukungavikeleki nokuqina. Le software ikuvumela ukuthi ufinyelele kukhompyutha kude.
Izici zayo ezibanzi nokusebenza kwazo kukuvumela ukuthi uthuthukise ukusebenza kwesilawuli kude ngokusheshisa ukucutshungulwa kwesithombe sehadiwe. Iphinde ikuvumela ukuthi ulahle ifayela kusuka kwikhompyutha ekude liye kwenye ikhompyutha.
Kodwa-ke, yize kubalulekile, ukubuyela emuva okukhulu kwale software ukuthi ngenkathi ubuyekeza kunguqulo entsha, isistimu yakho ingahle yehle, futhi izindleko zayo zenguqulo yobungcweti ziphakeme impela. Yingakho abasebenzisi abaningi bafuna ezinye izindlela zeTeamViewer kulezi zinsuku.
Kungani udinga ezinye izindlela zeTeamViewer?
Kubasebenzisi abasha, isoftware yeTeamViewer akulula ukuyilungisa, okuqhubeka nokudala izingqinamba eziningi zokuphepha. Futhi uma isoftware yakho yeTeamViewer ingalungiselelwe kahle, kungenzeka ukuthi uhlelo lwakho lungaba sengozini. Futhi, uma ufuna ukusebenzisa le software ngezinhloso zebhizinisi, kuzofanele ukhiphe utshalomali olukhulu kuyo.
Yebo, lezi zizathu zanele ukubheka enye indlela yeTeamViewer. Ngakho-ke, lapha sifingqe izindlela eziyisikhombisa eziphezulu zeTeamViewer, ezingafinyelela kalula kumakhompyutha akude.
Ufuna Windows 10 Isaphulelo Somfundi? Thola esigabeni sethu seBhulogi.
Ezinye izindlela zeTeamViewer (2020) - Top 7 Best
Lapha, sihlolisise inani lezixazululo eziyisikhombisa ezihlukile zesoftware ezingaba enye indlela eqinile yeTeamViewer. Le software ehlukile isebenza njengamathuluzi angcono kakhulu okuphatha akude wabo bonke abahlinzeka ngezinsizakalo. Ngakho-ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi, qhubeka ufunde ukuze wazi ngalezi ezinye izindlela.
Le ngenye yezindlela ezingcono kakhulu zeTeamViewer njengoba ukwazi ukuyifinyelela ngokushesha nangokuqondile ngezinhlelo ezisebenza ngokuyinhloko, kungaba ngamathebulethi, ama-laptops, ama-smartphone kanye nama-desktops. Ngokufinyelela kumbukeli we-HTML, iqembu labantu abangaphezu kwama-25 lingafinyelela ikhompyutha eyodwa ngasikhathi sinye.
Ngaphandle kwalokho, umlawuli angavumela umsebenzisi ngokushesha futhi ashintshe kalula. Iphinde ifake ezinye zezici ezihlaba umxhwele zemihlangano ebushelelezi eku-inthanethi njengokuxoxa ngombhalo, ukuqopha, ukusebenza kwebhodi elimhlophe, njll.Umuntu angafinyelela kwidemo izinsuku eziyi-14; noma kunjalo, ayisakhululekile. Abasebenzisi kulindeleke ukuthi bakhokhe cishe ama-48 nenyanga zonke ukunikeza amalayisense kubasebenzisi abahlanu.
2. Dameware Remote Yonke Indawo
IDameware Remote Yonke indawo kungenye into ebaluleke kakhulu esikhundleni seTeamViewer. Le software inikeza ukusekelwa kwedeskithophu ekude kumakhompyutha we-MacOS X, Windows, neLinux. Ngakho-ke, kude kakhulu ngokombono wethu, lesi yisixazululo sesoftware yokuphatha okukude kakhulu esitholakala emakethe.Isoftware isebenza kahle kubasebenzisi beWindows ngoba ivumela umphathi ukuthi engeze ngokushesha abasebenzisi enkombeni yabo esebenzayo futhi abanikeze isibonelelo esisheshayo sokufinyelela amathuluzi okuphatha.
Lesi sixazululo sesoftware esuselwa emafini sinikeza kalula ukufinyelela nokuqina kumsebenzisi kusuka kuthuluzi le-SaaS. Yize kungeyona enye indlela yamahhala yeTeamViewer, isengakusebenzela. Okwamanje, ungaqala kabusha amakhompyutha kude, uthathe izithombe-skrini ngokuchofoza okukodwa, bese uxoxa nabasebenzisi bokugcina ngosizo lwale software.
Ngabe ufuna enye indlela yeTeamViewer enenkokhelo eguquguqukayo? Uma kunjalo, bese ushaya ngqo ku-Splashtop. Yisixazululo sedeskithophu esithembekile esithembekile esitholakala kuwe njengamahhala kanye nenguqulo ekhokhelwayo.Isekelwa ngamadivayisi we-Linux, MacOS X, Android, Windows, ne-iOS. Uma ukhathazeke ngezinkinga zokuphepha, bese ukhohlwa izinkathazo zakho ngoba kunikeza amazinga amaningi wokubethela idatha ekuphepheni okuphelele kwamadivayisi akho.
Noma kunjalo, i-latency iphansi kakhulu kule software. Noma kunjalo, kuyindlela enhle kulabo bantu abenza ukusakazwa okuningi komsindo nevidiyo. Ukwenza kube lula ukufinyelela nokulawula okukude kungenye yezici ezinhle kakhulu zalesi sixazululo sesoftware. Ngaphezulu kwalokhu, kumahhala uma usebenzisa abasebenzisi abangabodwa. I-Splashtop ikhokhisa u- $ 60 minyaka yonke.
4. I-LogMeIn Pro
Uma ufuna enye i-TeamViewer yokubhekana nezinhloso eziyinhloko njengokusebenzisa ukwabiwa nokutholakala kwezinsizakusebenza ngaphandle kokubeka engozini ezokuphepha, kufanele uluthole lolu hlelo lokusebenza.
Ithuluzi le-LogMeIn Pro yiseva enhle kakhulu yamafu ehlangabezana ngokusobala nezidingo zakho. Iza ne-1TB yesikhala, ngakho-ke ungaqiniseka ngokugcina wonke amafayela wakho nezinhlelo zokusebenza lapha. Ithimba lakho lingafinyelela ngokushesha kumafayili kusuka kusitoreji uma kudingeka.
Ngaphezu kwalokhu, lo muntu ukhululekile ukuphrinta amadokhumenti akhe kude nephrinta yendawo, asebenzisane kalula namafayela athile, futhi enze imisebenzi ye-IT ejwayelekile, kanye nezinye izici ezihlaba umxhwele.
Enye inzuzo yokungena kwi-LogMeIn Pro ukuthi inokuvikeleka okuphezulu, ongase ukuphuthele kuTeamViewer. Isikhathi sakho sivikelwe ngokubethela kwe-AES 256-bi kanye nokuthuthwa kwe-TLS 1.2. Ngaphandle kwalokhu, iseva iphinde ikhonjwe ngokushesha ngosizo lweNgqalasizinda Yokhiye Womphakathi.
5. Ideskithophu Ekude ye-Chrome
Njengoba sibonile esigabeni sesingeniso, enye yezinkinga ezinkulu zokusebenzisa i-TeamViewer yinkimbinkimbi yayo. Kepha manje unenye indlela ephelele ngesimo sedeskithophu ekude ye-Chrome. Lesi sixazululo se-software siqonde ukusisebenzisa. Konke okudingayo ukuvula i-Google Chrome kukhompyutha yakho ekude. Uzokwazi ngokushesha ukulawula nokuqapha amadivayisi awela kuzoni zakho zenethiwekhi.
Uma ukhathazeka ngejubane lokusebenza kohlelo lokusebenza, kuyamangalisa-ke. Akuthinti isivinini sokusebenza kwe-chrome. Leli thuluzi liza nomaki wentengo futhi likunikeza ukusebenza okufushane. Uzophuthelwa eminye imisebenzi efana nezingcingo zevidiyo, akukho ukuxoxa, nokwabelana ngesikrini, onakho eMikogo. Noma kunjalo, kungakuhle ukufinyelela kumadivayisi akude.
6. Imihlangano yeWebex
Yebo, iMihlangano yeWebex iyindlela ehlukile kwiTeamViewer njengoba futhi iyithuluzi lomhlangano web elihamba phambili. Lolu uhlelo lokusebenza olususelwa efwini olusakazeka kumaseva ahlukahlukene we-Cisco ngama-bandwidth athile alinganiselwe. Ngaphandle kwalokho, le software ifaka phakathi imiqondo yokulondoloza okwesikhashana nokwenza isipele, okwenza leli thuluzi libe lihle eqenjini elikhokhiwe nelikhulu elifuna ukutholakala okuphezulu.
Kodwa-ke, iphakethe le-premium leWebex likuvumela ukuthi usethe izingqungquthela zewebhu nezivakashi eziyi-100. Ungenza ngezifiso iphrofayili yabasebenzisi, ukwabelana kwesikrini nesethi yabo yezimvume.
Ngaphandle kwalokhu, uzoba nokuvikelwa kwephasiwedi futhi ufinyelele kalula kumadivayisi akude, futhi uhlanganise nombono weMicrosoft. Kepha lolu hlelo lokusebenza likuvumela kuphela ukuba ube nengqungquthela nabasebenzisi ababili kuphela ngesikhathi enguqulweni yalo yamahhala. Ngakho-ke, ungacabanga ngokukhokha inani eligcwele ukufinyelela wonke amathuluzi alo.
7. I-REALVNC Xhuma
Okokugcina ohlwini ku-REALVNC Connect. Ngenye yezindlela ezingcono kakhulu zeTeamViewer maqondana neseshini nokuphepha ku-REALVNC. Lokhu kunikela ngokuvikelwa kwephasiwedi nokubethela.Ifaka phakathi kokubili ukufinyelela kohlelo lokusebenza kwesibukeli kusuka kukhompyutha yakho kanye nohlelo lokusebenza lweseva olufakwe kukhompyutha oyilawulayo.
Into enhle kakhulu ngale software ukuthi ayidingi ukucushwa kwe-router kanye ne-firewall ethile ukuze itholakale.Ngaphezulu kwalokhu, kuyatholakala kuzo zombili izinketho ezikhokhelwayo nezamahhala. Uma ufisa ukufinyelela amathuluzi amaningi, kuzodingeka ukuthi ukhokhe inani eliphansi elincane cishe lama- $ 55. Ngaphezu kwalokho, uzothola ezinye izici ezijwayelekile ezifana nengxoxo nokudluliswa kwedatha.
Ngakho-ke, manje unezinye izindlela ezinhle kakhulu zeTeamViewer ongazifaka kumakhompyutha akho ukwakha ukuxhumana okukude nenye i-PC yendawo ekude. Lezi ezinye izindlela zizohlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokufinyelela kumakhompyutha akude.
Lungisa Iphutha leMicrosoft Minecraft Remoteconnect
Okukhulu Okungamele Okungamele: Amaphutha Okuthenga Amaholide Okufanele Uwagweme
Layisha Isizini 2: Usuku Lokukhishwa: Sakaza, Isakhiwo kanye Nakho Konke Odinga Ukukwazi!